အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တီချမ်း ပိန်ဆေး သံပရာရည်
ကဲ တောင်းဆိုသော ပရိတ်သတ်များအရ ကိုယ့်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် ပိန်ဆေး ကိုဖော်ပြပါမယ်။ ဒေါ်ဝင်ဒီက တဂျီဂျီပါ။ စကားမစပ် ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ် ခုတလော သိပ်သိပ်သိပ်သိပ်ကြိုက်နေတဲ့ ဘလောခ်ဂါ မ နာမည်ကလဲ ဝင်ဒီပါတဲ့နော်။ စလုံးက တရုတ်မပါ။ (အော် လောကကြီးမှာ တီချမ်း ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဘလောခ်ဂါ လဲရှိသေး တယ်နော်။ အင်းရှိတာပေါ့.......တီချမ်းလဲ လူပဲ) ထားတော့။ အမှန်ကတော့ ပိန်ဆေး အဖြစ်ရယ်လို့ သောက်တာ လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုတလောက ဖရက်ရှ် မာ့ကက် ကိုသွားရင် သံပရာသီးတွေကို ကီလိုလိုက်ကို အားရပါးရ ဝယ်
Posted by တီချမ်း at 2:36 AM
ပျားရည်မပါလို. မရဘူးလား မရှိလို.ပါ
တီချမ်း February 15, 2012 at 9:23 PM
ရတာပေါ့ကွယ် ပျားရည်ပါတော့ ပိုသောက်ကောင်းတာတခုပါပဲ
သောက်တတ်ရင်တော့ သကြားရည်အစား ငရုတ်သီးမှုန့် နည်းနည်းထည့် သူ့ငရုတ်သီးမှုန့် က ခုနက ပေးတဲ့ လင့်မှာ သေချာကြည့်နော် ပြီးတော့ခုနက ပြောတဲ့ Maple syrup ကိုသုံး
ချစ်ကြည်အေး February 15, 2012 at 9:35 PM
ခုတစ်လော ၀နေတာ တီရေ...။ အစားလည်းမလျှော့နိူင်၊ အအိပ်လည်း မလျှော့ချင်....။
သံပုရာရည်ဖျော်ပေးမဲ့ အားကောင်းမောင်းသန်ဦးဗလလည်း မရှိ။ ခက်သကွယ်.....ဟိဟိး)
လင့်ခ်က မီးမြေခွေးနဲ့ ဖတ်တာ မရဘူး။ ပလိန်းကြီးပဲ ပေါ်လာတယ်...း(
တီချမ်း February 15, 2012 at 9:43 PM
ရပါတယ် ဒေါ်ချစ်ရဲ့ မီး ဖွင့်တာရတယ်
ဦးချစ် ကို ညှစ်ခိုင်းလေကွယ် (သံပရာသီး)
ဂျီမ ကနေ ပို့လိုက်ပြီ လင့်ကို
Evy February 15, 2012 at 9:50 PM
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စမ်းသောက်ကြည့်ရမှာပေါ့။ ပိန်သွားလဲ အမြတ်ပဲ။ တီပြောသလို့ ကြောင်စာလောက်ပဲ စားတာပါပဲ။ အဲဒါကို တဖြည်းဖြည်းဝိတ်တက်လာလို့ မနည်းဆွဲထားရတယ် :D
ပျားသံပုရာရည်ကြိုက်သူ February 15, 2012 at 11:40 PM
ပျားသံပုရာရည်လေး သောက်လို့ ကောင်းမှကောင်း။ ဂွတ်!
Big C မှာ ပျားရည်လည်းရှိတယ်၊ သံပုရာသီး ညစ်ပြီးသားပုလင်းလေးတွေလည်း ရောင်းတယ်။
ညစ်ပေးမယ့် ယောက်ျားက အဝေးရောက်နေတာကိုး :P
တီချမ်း February 15, 2012 at 11:57 PM
evy ရေ ဟုတ်တယ် ပိန်တဲ့သူက ပိန်ကိုပိန်တာ ဘယ်လောက်စားစား ကြောင်စာလောက်ကနေ ကြောင်မ စာလောက် လျော့စားကြည့်ပါလား
crystal ပျားရည်ကို တီဝယ်တဲ့ တံဆိပ်ဝယ်နော် နောက်ပြီး သံပရာသီး ညှစ်ထားတဲ့ ပုလင်းတွေက အာတစ်ဖစ်ရှယ်တွေ တကယ်တော့ မကောင်းဘူး သံပရာသီးစစ်စစ် ရရင်တော့ပိုမွှေးတာပေါ့
Crystal February 16, 2012 at 12:02 AM
အိုကေ၊ သံပုရာသီး သုံးလုံးလောက် အမြဲ ရေခဲသေတ္တာထဲ အမြဲထည့်ထားတယ်။
Wow!! Your 'Maung' is so good to you. Envy you.
Vista February 16, 2012 at 12:00 PM
ခုတလော ကျနော်လည်း သံပုရာရည် ဓါတ်ကျနေတယ် ပျားရည်ထည့်တဲ့အခါထည့် မထည့်တဲ့အခါလည်း ဆားနဲ့ သကြားရည်နဲ့ ပေါ့။
လူက ပိန်ပါတယ်ဆိုမှ .. သံပျာရည်ကို ဘယ်လိုသောက်လို့ ကောင်းနေမှန်းမသိဘူး။ တနေ့ ကို တီချမ်းခွက်လောက်နဲ့ တခွက် အမြဲသောက်ဖြစ်နေတယ်။ အရင်တုန်းက ကြိုက်ခဲ့တဲ့ ကိုကာကိုလောင်တောင် မသောက်တာကြာပေါ့ ဟိဟိ။
တီချမ်း February 16, 2012 at 3:31 PM
ကိုကာကိုလာ ထက်တော့ သံပရာရည်က အများကြီး ပိုကောင်းပါတယ် ဗစ် ရှင်လဲ တော်ကြာ ဘီယွန်စေး လို ကိုယ်လုံးဖြစ်လာတော့မယ် လှလာမယ်ပြောတာနော်
သံပရာခွံ တဖတ် ကျသွားလို့ပြန်ဆယ်ရသေးတယ်။ တကယ့်မောင်ပဲ။
so lovely writing!
khin kha September 10, 2013 at 12:37 PM
မနက် မနက် သံပရာတစ်လုံးကိုအရည်ညှစ်ပြီး ရေနွေးနဲ့သောက်တာ ကောင်းပါသလား။